Factory Tour - Hebei Delin Imishini Co., Ltd.
I-DH (R) Uchungechunge lweSlurry Pump
DM (R) Uchungechunge oluludaka Pump
I-DF (DHF) Series Vertical Froth
I-DV (R) Series Sump Slurry Pump
I-DG Series Gravel Pump
I-DG Series Dredge Pump
I-DSC (R) Uchungechunge lwe-FGD Pump
Izinga lemikhiqizo yethu lingcono kunezinye izinkampani ezikule mboni efanayo. Ukuhlola kusuka ekusakazweni okwenziwe opharetha bethu abanolwazi nabanekhono nabahloli kuqinisekisa ikhwalithi ephezulu yazo zonke izingxenye kuwo wonke umshini.
Sine uchungechunge lwezinto zokukhiqiza kufaka phakathi i-planomiller, i-lathe mpo, umshini wokubhola, i-mixer ehambayo, umshini wokulungiselela isihlabathi, isithando somlilo, isithando somuthi oshisayo, njll.
imishini yokuhlola izinto zokwakha: isakhiwo se-metallographic, ukucubungula izingxenye ezisele, ukusebenza ngemishini, ukuhlangana, kanye nokusebenza komkhiqizo kungenziwa ngokuhlola ithuluzi lokuhlaziya izinto nokuhlola, njengokuhlola ukushaqeka kokuqina, amandla omhloli womhlaba wonke, ukuhlola umhloli wamandla, nezinsimbi zokulinganisa namathuluzi wokuhlola wokusetshenziswa okukhethekile nokusetshenziswa kwendawo yonke. Ngaphandle kwalokho, sakhe ipulatifomu yokuhlola yobungcweti yokuhlola imikhiqizo efana namaphampu.
Ukuhlolwa kokusebenza kwemikhiqizo
UDelin ungumnikazi wesisekelo esikhulu sokuhlolwa kwamanzi se-slurry plump eNyakatho neChina. Ukusebenza komkhiqizo kuzohlolwa ngaphambi kokulethwa, ukuqinisekisa ukuthembeka nekhwalithi yemikhiqizo yethu.
Indawo yokugcina impahla
Viwe Okuningi +
Umkhakha wezobuchwepheshe osemqoka usalele emuva kancane, ukukhuphuka komkhakha wamaphampu wezwe lami kusekude phambili